Madaxweyne Farmaajo oo war cad kasoo saaray qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo war cad kasoo saaray qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa si aan caadi ahayn u cambaareeyay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay suuqa Kaawo Godey ee ka yaalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Qaraxaasi oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa dhacay abaarihii xilliga duhurnimo, waxaana la xaqiijiyay inay ku geeriyootay dad tiro ahaan kor u dhaafaya 30 qof oo isugu jira dad shacab iyo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Qoraal kooban oo uu madaxweyne Farmaajo soo dhigay boggiisa Twitterka ayuu ku sheegay in qaraxan uu yahay mid bahalnimo ah islamarkaana lagu xasuuqay shacab farabadan oo aan waxba galabsan, ayna ka dambeysay kooxda Al-shabaab.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ku baaqay in shacab iyo ciidan loo midoobo sidii loola dagaalami lahaa kooxda Al-shabaab ee nabadda u diidan dalka Soomaaliya.
“Qaraxii ka dhacay suuqa Kaawo-Godeey ee degmada Wadajir wuxuu caddeyn u yahay bahalnimada Al-shabaab, waa in shacab iyo ciidanba loo midoobaa.” Sidaasi waxaa yiri madaxweyne Farmaajo
Weerarada kooxda Al-shabaab ayaa sii xoogeystay tan iyo intii uu madaxweyne Farmaajo xilka la wareegay, waxaana dhacay weeraro isugu jira khaarijin iyo qaraxyo kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxaan ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee mudooyinkan dambe ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in qaar ka mid ah dadkii la dhigay isbitaalada ay u geeriyoodeen dhaawacyadii qaraxa ka soo gaaray.